Qalabka juquraafiyadeed ee lagu habeeyey Bentley Map - Geofumadas
Mee, 2009 Microstation-Bentley, egeomates My
Maalmo dhowr ah ayaan hadda ka hadlayay BentleyMap, dhawaanahan waan tixgelinay guuritaanka xogta iyo suurtogalnimada in la saxo geedi socodka, xaaladdaan waxaanu dooneynaa inaan tusno tusaalayaal qalabaynaya qalabyada Juquraafi ahaaneed iyo wixii aan u baahnayn marka aan bilaabeyno xfm.
Ka hor inta Bentley Lasco ee nidaamka xfm 2004 shirka ayaa lagu soo bandhigay sida ka duwan in ay ku dul socda, laakiin ma uusan ka dhawaajin sida rafcaanka sida Maamulaha Geospatial ka muuqatay si adag sida hadda. Kadib markaan aragnay farsamooyinkeena waxaan helnay waqti aan ku fariisto oo aan ka fekerno sida ay suurtogal u tahay in la isku daro xfm adoon ka tagin Geographics iyo halkaas ka jira mashruuc xiiso leh ayaa ku dhashay in aan kula hadlo mar kale. Xaaladdan oo kale waxaan doonayaa inaan diirada saaro wax ugu horeysay ee aan sameeyey markii qalab muraaqooda Geographics ma arag meel kasta oo Bentley Map, waxaan sameeyey qalin dhawaan ka mid ah barnaamijyada University Catholic iyo amarka wanaagsan oo .net.
Qalab aan loo baahneyn oo ah Juquraafi.
Dhibaatada Bentley Map waa in ay ka tagtay shaqooyinka hoose ee juqraafi, kaas oo aan isticmaaleynin sida loo xaliyo (ma aha qaab hab dhaqan). Haddii aad isku aragto, iyagu waa aasaasiga ah, oo waxaa tabar weyn ee Bentley Map, oo ka maqan conventionality aad u sahlan, laakiin ka yar xooggan ka badan qalab kale leeyihiin iyo haddii aad qabto iyaga yihiin iyo sidoo kale ku maqan in dadka isticmaala ee ururka ka horeeyey. Aynu aragnay waxa ay ahaayeen:
Fiidyowgan waxaa laga soo saari karaa geofumadas, sawirada hoose ayaa laga soo qaadayaa. Horumarka wuxuu ku saabsanaa .net, mashruucan wuxuu ku saabsanaa Geographics 8.5 iyo xogta database wuxuu ahaa Oracle 9.
Mashruucaan fudud ayaa loo oggol yahay in lagu bedelo sheyga garaafka ee dgn oo ku jira xubno la xidhiidha mashruuca iyada oo loo marayo miiska ujeedka, laakiin Bentley Map ma aysan keenin arrin ku saabsan, sidaas awgeed waxaan dib u dhignaa:
Xulashada fekerka adigoo dooranaya qaybta, nooca iyo muuqaalka, tani waxay xallineysaa wixii aan ku sameynay adeegaha / maaraynta muuqaalka.
Sidoo kale badhanka hoose wuxuu u oggolaanayaa inuu sameeyo xulashada muuqaalka ku salaysan shay uu horay u lahaa iyo kan kale in lagu meeleeyo muuqaalka firfircoon ee hal ama dhowr arrimood.
Kadibna dhinaca tabka qalabyada kale ayaa la dhigey si ay u arkaan macluumaadka muuqaalka iyo ka saarida, taas oo ah waxa aan ogaanay in aan isdabajoogo iyo kala go '.
Mawduuca la xalliyay, marka laga reebo isbeddelka mudnaanta koowaad (oo aan waligeed la isticmaalin), 5 waxay amar ku bixisay in la xakameeyo sifooyinka.
Had iyo jeer in ay leeg- saxda ah, badhan la saaray in ay qabsadaan macluumaad joomateri ee, xulashada shayga kor guddi kuu oggolaanaysa in aad doorato aad doonayso inaad cusboonaysiiso: aagga, wareega, dhererka ama duwo kala duwan. Tani waxaa lagu sameeyey Geographics leh database / wareega wareega-wareega update
Ka dibna badhkii ugu dambeeyey ayaa la sameeyey si loo gudbiyo xogta u dhaxeysa hal shay iyo mid kale; wuxuu ka codsanayaa haddii xogta la bedelo.
Marka la eego muuqaalka, ama waxa ku jira joqraafiga loo yaqaano maamulaha bandhig, waxqabad ayaa loo sameeyay isla codsi la mid ah, ugu yaraan sida juquraafi ahaantu samaysay. Halkan waa ay karaan daawashada fiidiyaha.
Haddii la dhigo, waa liiska qaybaha, oo leh sifooyinkooda iyo badhkoodii si aad u damiyaan, u rogaan, doortaan ama ka tirtiraan wax kasta. Iyada oo xulasho dheeraad ah oo lagu dooranayo aragtida.
Ilaa hadda waan ogahay, tani waxay ahayd mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu horreeyay ee lagu fuliyey xfm, sanadka 2005, wax ka yar hal sano ka dib markii Bentley lagu soo bandhigay shirkii 2004 ee Orlando. Isla markiiba Bentley wuxuu sameynayaa horumarinta ee qalabkaaga cusub oo isku dayaya in ay isticmaalaan si ay uga baxaan Geographics.
Ma dhameeyaa? Inkastoo Khariidadda Bentley wuxuu u oggol yahay inuu horumariyo VBA iyo samaynta ku dhawaad ​​shakhsi ahaan, sheyga Bentley wuxuu iloobaa waxa uu isticmaalaayo inuu sameeyo wax ku filan. Xaaladeena, waxaan ku soo saarey horumarinta geofumados heerkan, laakiin ma aha waxa ay tahay "sheyga" sanduuq "waa inuu kor u qaadaa haddii ay rabto in laftiro.
Post Previous«Previous 1.9 iyo 2.0 oo deggan July iyo September
Post Next Nidaaminta hababka wanaagsanNext »
3 Jawaab ah "Qalabka juquraafi ah ee lagu habeeyey Bentley Map"
Markaan tago aaladaha ma helayo ikhtiyaarka Juquraafi. Waxaan isku dayayaa inaan dhoofiyo kml
Waxaa macquul ah in aadan isticmaalayn Geographics, kaliya microstation.
Suurtagalnimada kale waa in Geographics si xun loo rakibay.
Ma helayo ikhtiyaarka Juqraafi ah markaan helo qalab. Waxaan isku dayayaa inaan dhoofiyo kml.